Author: TheDC News Desk November 9, 2017
विश्वभरी प्रख्यात दार्जिलिंग चिया, विश्व धरोहर दार्जिलिंगको ट्वाई ट्रेन र यहाँको सुखद मौसमसित चिरपरिचित विश्व समुदाय भारतको पश्चिम वंगाल राज्य अन्तर्गत एउटा सानो पहाड़ र तराई सम्मिलित जिल्लामा भारतीय गोरखा जातिको बसोबास छ भन्ने कुरोमा अनभिज्ञ रहेको देख्दा ती प्रश्न सोध्नेहरूलाई भन्दा आफूलाई धेरै प्रश्न तेर्साउन मन लाग्दथ्यो । फुर्सदको समयमा निम्न प्रश्नहरू मेरो मनमा उब्जन्थे ;
१) भारतभरि छरिएर बसेका गोरखाहरूको भारतीय पहिचानमा सधैं किन प्रश्न चिन्ह खड़ा हुन्छ?
२) भारतीय संविधानको प्रावधान अनुरूप जातिय सांस्कृतिक औ भाषिक आधारमा गठित राज्यहरू मध्ये गोरखाहरूको अलग “गोरखा” राज्य किन गठन भएको छैन?
३) के राष्ट्रको सुरक्षा हेतु गोरखाको योगदान र बलिदानको उल्लेख्य मुल्यांकन अझै भएको छैन?
४) के राष्ट्र निर्माणमा गोरखाहरूको योगदान र बलिदानको राष्ट्रीय अभिलेखको अझैसम्म अंश औ मापदण्ड पुरा भएको छैन ।
५) के गोरखाहरूले राष्ट्रको हितमा भातृत्व,भाईचारा औ राष्ट्रीय अखंडता कायम गरेका छैनन्?
६) के गोरखा समुदायबाट कुनै एक दक्ष व्यक्ति छैन जसले राष्ट्रीय स्तरमा गोरखाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ औ कुनै राष्ट्रीय पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ?
५) के गोरखा समुदायमा बौधिक्ताको कमी अझै खट्किरहेको छ?
६) के गोरखा समुदायले व्यवस्थापन र प्रशासनमा अझै दक्षता हासिल गरेका छैनन्?
७) के गोरखा समुदायमा अझैसम्म एक कुशल, दक्ष र ईमान्दार नेताको जन्म भएको छैन औ भएर पनि पाखण्डतालाई शिरपेच बनाएका हुन्?
८) के गोरखा समुदायमा साक्षरता दरको विकाश भएको छैन ?
९) के हाम्रो शिक्षण प्रणाली व्यवहारिक छैन ?
१०) के हामीमा राजनीतिक ज्ञानको कमी भएको हो औ आधारभूत अधिकारको समेत ज्ञान नभएको हो?
११) सदैव “बीर गोरखाको” गुथी मात्र पहिरिएर हिँड़ने कि बुद्धिमताको पनि?
१२) के हामी सांच्चै भोलीवादी प्रथाले ग्रसित छौं?
१३) के हाम्रा युवा पीढ़ी निष्क्रिय र शिथिल छन्? कि तिनीहरूलाई प्रेरणा र हौसलाको स्रोतको कमी भएको हो?
१४) युवा पलायनको कारणहरू के के हुन् त?
१५) के ग्रामीण क्षेत्र औ चिया कमानको जीवन स्तर सधैं सोचनिय अवस्थामा नै रहने हुन् त? दीर्घकालीन उपाय र समाधानहरू छैनन् त?
१६) चिया कमानका श्रमिक औ तिनीहरूका परिवार कहिले सम्म गरिबी र कुपोषणको शिकार हुने हो?
१७) कहिले सम्म हाम्रा गरिब श्रमिक र दिदी बहिनीहरू कमानको घण्टा नबज्दै रूझीभिझी चियाको बुटा समाउँन पुग्न पर्ने त?
हालैमा अधिकारिक दार्जीलिंग भ्रमणमा आएका रेलवे मंन्त्री श्री सुरेश प्रभुको बयान कत्तिको विवादास्पद रूपमा लिए हाम्रा मानिसले र पत्रपत्रिका र पत्रकारहरूको कति ध्यान आकर्षण गर्यो थाहा लागेन तर अन्य ठाँऊ र जाति प्रति यस्तो पाखण्डपूर्ण,मिथ्यात्मक औ ढोंगपूर्ण बयान दिएको भए कति हंगामा मच्चिने थियो होला । कोलकताबाट प्रकाशित प्रख्यात दैनिकी “टेलीग्राफले” ट्यूटर मार्फत दार्जीलिंगको एक चिया कमानको तस्बीर साँझ्दै #मकैबारी#नेपाल लेखेर गोरखाहरूको घाऊमा नुन छर्किने दूर्भावपूर्ण भनौं या दूेषपूर्ण कार्य गरे तर हाम्रा मानिसले शिष्टाचारपूर्ण प्रतिरोध पनि गर्न भ्याए कि भ्याएनन् ।
त्यसर्थ, एक शताब्दी भन्दा पुरानो हाम्रो पुर्खाहरूले गोरखा जातिको अलग राज्य #गोरखाल्याण्ड हुनु पर्छ भन्ने पहिचानको मांगलाई सानोतिनो बिकाश औ विकाश बोर्डहरूसित सम्झौता गर्यौं भने म जस्ता कयौं अरू भारतीय गोरखाहरू विदेशमा मात्र नभएर आफ्नै देशमा पनि त्यही प्रश्न “आर यू फ्रम नेपाल?” सुनेर सदैव तर्सिनु पर्नेछ र आफ्नो अस्तित्व र पहिचानबाट वंञ्चित संसारको अगाड़ी होंचिनु बाध्य भई गोरखा जाति हुनुमा आफ्नो अभिश्राप र दूर्भाग्य भएको ठान्नु बाहेक अरू कुनै उयाय रहने छैन र अरूको हेलचेक्र्याई र द्वेशको चोटको आँशु बोकेर आँउदो भावी पीढ़ीलाई गोरखाको अस्तित्व र पहिचानको दुखदायी कथा दोहोर्याउँन बाहेक कुनै विकल्प रहने छैन ।